ရှောက်ရည်မှာ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပင် အသုံးပြု ခဲ့ကြပါတယ်။
(၄)အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
(၁၄)ဝက်ခြံ၊ မှည့်ခြောက်နှင့် အမည်းစက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
credit to Health Articles
HTML5 နဲ့ CSS3 ကို အသုံးပြုပြီး WEBSITE ရေးနည်း အပိုင်း (၄+၅)
Singapore Web Design website ကို ဥပမာ ထားပြီးတော့ website ရေးနည်းကို သင်ပြပေးထားတဲ့ video tutorial ဖြစ်ပါတယ်။ HTML5 နဲ့ CSS3 ကို အသုံးပြုပြီး ရေးပြထားပါတယ်။ CSS sprite ရေးနည်းကိုလည်း ဒီတစ်ပတ် သင်ခန်းစာမှာ သင်ပေးထားပါတယ်။
အရင်တစ်ခေါက်က ရေးတာတော့ တော်တော်လေးပြီးနေပါပြီ၊ ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ video သင်ခန်းစာတွေကို တောက်လျှောက်လုပ်လာတဲ့လူကတော့ ဒီအချိန်မှာ website တစ်ခုရဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ဝက်လောက် ပြီးနေမှာပါ၊ အခုတင်ပေးမယ့် သင်ခန်းစာ နှစ်ခုနဲ့ပါပေါင်းလိုက်ရင်တော့ website တစ်ခုရဲ့ စာမျက်နှာ လေးပုံ သုံးပုံလောက်တောင် ပြီးနေမှာပါ။
အရင်တုန်းက တစ်ပတ်ကို သင်ခန်းစာ တစ်ခုပဲ တင်ပေးပေမယ့် ဒီနေ့တော့ video သင်ခန်းစာ နှစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါဦး၊ video သင်ခန်းစာတွေ ပြီးရင်လည်း ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ website files တွေ အားလုံးကို တင်ပေးပါ့မယ်။ ဒီတစ်ပတ်အတွက် video သင်ခန်းစာတွေကတော့ …
အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်: Myanmar IT
ယေဘုယျအားဖြင့် ခါးနာခြင်းသည် သက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိသည်။ သို့ သော် အနေအထိုင်ပုံစံမမှန်ခြင်း၊ အားစိုက်လွန်း၍ကြွက်သား နှင့်အကြောများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ အ၀လွန်၍ဗိုက်တွင်အဆီစုဝေးခြင်းတို့ ကြောင့်လည်း သက်ကြီးပိုင်း သာမက၊ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တို့ ခါးနာတတ်ကြသည်။ ထို့ ပြင် သားအိမ်ပတ်ဝန်းကျင် အရိုးနှင့်ကပ်နေ သည့်အရွတ်များ ဆွဲဆန့် ရခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးအားလုံးနီပါး ခါးနာလေ့ရှိကြသည်။ နာတာရှည် ခါးနာလာပြီ ဆိုမှဖြင့်၊ အအိပ်ပျက်-အစားပျက်-အလုပ်ပျက်ကာ ခံစားရသူအဖို့ပင်ပန်းခက်ခဲရုံမက၊ ဘေးမှမြင်ရသူအဖို့ လည်း စိတ်မသက် သာလှပေ။
ကျောက်ကပ်၊ ဆီးအိမ်၊ သားအိမ်ရောဂါများကြောင့်လည်း ခါးနာတတ်ပေရာ၊ ဝေဒနာမပြင်းထန်ခင် ကုသမှုခံယူရင်း အောက်ပါ အိမ်တွင်းကုထုံးများဖြင့် သက်သာနိုင်ကြပါစေရန် မျှဝေလိုက်ရပါသည်။
ခါးနာသည့်နေရာသို့ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေး၍၊ ပူနွေးသော အစားအစာများကို စားပေးပါ။
ခါးနာခြင်းအတွက် ပင်စိမ်းရွက်က အကောင်းဆုံးသမားတော် ဟုအဆိုရှိရာ၊ ပင်စိမ်းရွက်ကို ၂-ခွက် ၁-ခွင်တင်ပြုတ်၍ အအေးခံကာ ဆားအနည်းငယ်ထဲ့သောက်ပါ။
ယူကလစ်ဆီ နှင့် မုန်ညင်းဆီတို့ ရော၍ အရေပြားထဲစိမ့်ဝင်အောင် အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
ထမင်းစားပြီးတိုင်း သကာရည် (သို့ မဟုတ်) တင်လဲရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁-ဇွန်းခန့် ကို ရေနွေးဖြူဖြင့် သောက်ပေးပါ။
ဖာလာစေ့ကို ပျားရည်ဖြင့် နှဲ၍ သောက်ခြင်းကလည်း အမြန်ဆုံးသက်သာလာစေပါတယ်.
အသာအယာ နှိပ်နယ်ပြီး ဆေးဖယောင်းချက် ကပ်ပေးပါ။
ရေခဲတုံးလေးများကို အ၀တ် (သို့ မဟုတ်) ဂုံနီအိတ်ပါးထဲထဲ့၍ အသာယအယာ လှိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မွေ့ ယာခင်းမထားသော ကုတင် (သို့ မဟုတ်) ကြမ်းပြင်ပေါ် ငြိမ်သက်စွာ ပက်လက်လှဲခြင်းက သွေးများကောင်းစွာ စီးဆင်လည်ပတ်စေသလို၊ အကြောအချဉ်ပြေ၍ ခါးနာခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ဒဏ်ကြေဆေးပူလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကို မဆိုလိုပါ)
မပြင်းထန်သော ခပ်ဖော့ဖော့ အကြောပြင်လေ့ကျင့်ခဏ်းများကလည်း ခါးနာသက်သာအောင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် iPhone က ယခင် iPhone 5ထက် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်မည်
နောက်ထပ် ထွက်ရှိလာတဲ့ သတင်း တစ်ခုကတော့ iPhone 5S အမည်နဲ့ ထွက်လာမယ့် နောက်ဆုံးမော်ဒယ် iPhone ဟာ ယခင် iPhone5ထက် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်ဆန်တယ်ဆိုတာ အသုံးပြုတဲ့ Processor ကိုပြောတာပါ။ 64 bits A7 Chip ကို အသုံးပြုထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည် သိသိ သာသာ မြန်ဆန် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Graphic လည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး ဘက်ထရီ သုံးစွဲ မှု နှုန်းလည်း ယခင်ကထက် အများကြီး သက်သာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ ထွက်နေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Samsung, LG, Sony, HTC စမတ် ဖုန်း များထက် သာလွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ရရှိမယ်လို့တောင် Apple အမာခံ ပရိတ်သတ်များက တစ်ထစ်ချ ပြောဆို ထားပါတယ်။
ဒါကလည်း Apple က Official ပြောဆိုချက် မဟုတ်သေးပါဘူး။ iPhone5မှာတုန်းက A6 ဆိုတော့ iPhone 5S မှာ A7 သုံးမယ်လို့ တွက်ချက်ခန့်မှန်း မှု ဖြစ်ပြီး အချို့  Prototype တွေမှာတောင် စမ်းသပ်နေဆဲလို့လည်း ဆိုကြ ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စက်တင်ဘာလ အတွင်း iPhone 5S မိတ်ဆက်ပွဲ ကို မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်မှာ နာရီပတ်နေရတာကို ငြီးငွေ့နေတဲ့သူတွေအတွက် ပစ္စည်းဆန်းလေးတစ်ခုပါ။
Ring Clock လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီနာရီလက်စွပ်လေးကတော့ တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၅ဒေါ်လာ ကျသင့်မှာပါ။ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ကိစ္စမျိူး မဖြစ်ရအောင် ခွဲစိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ စတီးလ်အမျိူးအစားကို အသုံးပြုထားပြီး အချိန်ကိုပြသဖို့ အတွက် အပြာရောင် (ဒါမှမဟုတ်) လိမ္မော်ရောင် LED ကို ရွေးခြယ်နိုင်မှာပါ။
ဘက်ထရီအားသွင်းဖို့ရာအတွက်တော့ လက်စွပ်နဲ့တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ wirelees Charger ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ အားအပြည့်သွင်းထားရင် တစ်ပတ်လောက်ထိ အေးအေးဆေးဆေး အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့တော့ဆိုပါတယ်။ ရေစိုမှာအတွက်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ လက်စွပ်ကို ရေစိုခံနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် မိုးရေထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
အာမခံကလည်း တစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် အရွယ်အစားကို ရွေးခြယ်မှာယူနိုင်မှာပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ ဒီနာရီလက်စွပ်လေးကို မှာယူလိုရင်တော့ အောက်ပါ Link မှာ သွားရောက်မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ယခင်က ပြည့်တန်ဆာများသည် တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဖေါက်သည် ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။၊ ကားမှတ်တိုင်များတွင် ရပ်ပြီး ကားစီးမည့် ခရီးသည် အချင်းချင်း လိုက်လံ ကပ်မေး အချက်ပြပြီး တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်လ်သို့ ခေါ်ဆောင်ကာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေကြသလို ကန်တော်ကြီး၊ ပြည်လမ်းမ များပေါ်ရှိ ကားမှတ်တိုင်အချို့တွင် ထိုင်လျက် ကိုယ်ပိုင် ကားများကို အချက်ပြကာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် နေသူများလည်း ရှိသည်။
ယခုအခါ အိုင်တီ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက် ၊ ချက်တင်၊ ဖေ့ဘွတ်စသည့် ခေတ်မှီနည်းများဖြင့် ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်လာသည်ကို တွေ့မြင် ကြားသိ နေရသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးသမီးများ အတွက် လိင်ကိစ္စကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသည်မှာ မဆန်းသော်လည်း အတုမြင် အတတ်သင်လာမည့် ဆယ်ကျော်သက်များ နှင့် အင်တာနက်ကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေသည့် ငယ်ရွယ် နုပျိုသည့် မိန်းကလေးများ၏ အရှက်နှင့် သိက္ခာအတွက်မူ စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေ တစ်ရပ် ဖြစ်လာနေသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများမှာ အသက် ၁၈ နှစ် မှ အသက် ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် အထိ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်နေပြီး အချို့မှာ ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီး ပြည့်တန်ဆာခေါင်းဆောင် များက Online အသုံးပြုကာ ဈေးကွက်ရှာဖွေပေးပြီး လိင်ဖျော်ဖြေမည့် အမျိုးသမီးငယ်များကို စုဆောင်း ထားသည်ဟုပင်သိရှိရသည်။
မြန်မာအမျိုးကောင်းသမီးတို့အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ဘ၀မျိုးမရောက်ရန် အုပ်ထိန်းသူမိဘများတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။ မိမိတို့ သားသမီးများ၏ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို တင်းကြပ်ရမည်ဟု မဆိုသော်လည်း
Aureum Online Media
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် တွံတေးဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒ (ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ)၏ (၅ဝ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အလှူငွေကျပ် (၁ဝ) သိန်းတိတိအား လာရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း (၉းဝဝ) နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ ထံသို့ တွံတေးဆရာတော်ကြီးမှ “ဒကာကြီးကျော်သူ အသင်းတွင်ရှိသလား … ရှိလျှင် ဘုန်းဘုန်း ဒကာကြီး ထံလာချင်လို့” ဟူ၍ မိန့်ကြားခဲ့ပြီးသည့်နောက် ယင်းနေ့ နေ့လည် (၂း၃ဝ) နာရီအချိန်တွင် သီရိမင်္ဂလာ မဟာစည်ရိပ်သာကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက တွံတေးဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒ (ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတ ဓရ)၏ (၅၁) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာအတွက်ရည်စူးပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ (သာ/၁၂၂၄) MITSUBTSHI PAJERO (MODEL – 94) ကားတစ်စီး လာရောက်၍ လှူဒါန်းသွားခဲ့ပါသည်။ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) လိုအပ်သည့်နေရာတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆရာတော်၏ကားအား လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူကိုယ်တိုင် လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ (သာ/၁၂၂၄) MITSUBTSHI PAJERO (MODEL – 94) မော်တော်ယာဉ်ာအး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ မေလပိုင်း (နာဂစ်ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းနောက် (၂) ရက်) တွင် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်မှ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
တွံတေးဆရာတော်ကြီး၏ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့သည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသော လှူဒါန်းမှုအခမ်း အနားများနှင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ရိုးရှင်းပြတ်သားလှသော သာမန်လှူဒါန်းမှုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အတွက်မှု အများအကျိုး ရွက်သယ်ပိုးရာတွင် အသုံးဝင်လှ၍ အဖိုးမဖြတ် နိုင်သော လှူဘွယ်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရတော့သည်။
တွံတေးဆရာတော်ကြီးသည် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုစီးနင်းနေသော မော်တော် ယာဉ်ကြီးအား လှူဒါန်းပြီးသည်နှင့် သူ၏ သာသနာပြု သီတင်းသုံးနေထိုင်သော (သီရိမင်္ဂလာ မဟာစည် ရိပ်သာကြီး)ကျောင်းတော်သို့ အငှားယာဉ် (Taxi) စီးနင်း၍ ပြန်မည်ဟုပြတ်သားလှသော အလှူဒါန ကုသိုလ်လုပ်ရပ်တို့ ကြားသိရသောအခါ ကျွန်တော်တို့သည် အလွန်အံ့သြမိကာ ဆရာတော်ကြီး လှူဒါန်းခဲ့ သော မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ဆရာတော်ကြီးအား ကျောင်းတိုက်သို့ ပြန်လည်၍ ပင့်ဆောင်ကာ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့သည်။
“ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ၊ ကိုယ့်ထံ ပြန်လာမည်” ဟူသော ယောဆရာတော်ကြီး၏ ဆုံးမသြဝါဒ စကားအရ တရားစာအုပ်၊ စာပေကုသိုလ်၊ ကျန်းမာရေး အခမဲ့ ကုသမှုကုသိုလ်၊ နာရေးကူညီမှုကုသိုလ်၊ ပညာရေးကုသိုလ် စသည့် ကောင်းမှုအလှူဒါန အသီးသီးတို့၏ အကြောင်းကြောင့် မိမိတို့ထံ ကုသိုလ်ကံ အကျိုးတရားများ အချိန်ကာလတစ်ခုခုတွင် ပြန်လည်ခံစားရမည်ဟု ယုံကြည်မိခဲ့သလို တွံတေးဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒ၏ ရိုးရှင်းပြတ်သားလှသော မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းမှုကုသိုလ်သည်ကား အချိန်ကာလတစ်ခု တွင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့ တက်လှမ်းမည့် မဂ်ဖိုလ်ယာဉ်ကြီးကို တွံတေးဆရာတော်ကြီး ပြန်လည် ရရှိခံစား ရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိကာ ယခုကဲ့သို့ ပြတ်သားလှသော ကောင်းမှုအလှူတော်ကြီးအား သမာဒေဝ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များနှင့်တကွ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ၊ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ အသင်းသူ/သားများ၊ ဝန်ထမ်းများမှ သာဓု … သာဓု … သာဓု ဟူ၍ နက်ရှိုင်းစွာခေါ်ဆို လိုက်ရပါ တော့သည်။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အား ခိုးပြေးသူကို အရေးယူပေးရန် မိန်းကလေးငယ်၏ ဖခင်က
တိုင်တန်းမှု တစ်ခုကို သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းက သြဂုတ် ၂၄ ရက်က
အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
မိန်းကလေးငယ်သည် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဦးထုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်
အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး သြဂုတ် ၇ ရက်က နေအိမ်မှ အလုပ်သို့
ထွက်ခွာသွားသော်လည်း ညဘက်တွင် အလုပ်ရှင်က သူမ အလုပ်လာမဆင်းကြောင်း
မိဘများထံ ဖုန်းဖြင့်အကြောင်းခဲ့သည်ဟု မှုခင်းမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ဖခင်က လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ နှစ်ရက်ကြာသည်အထိ မတွေ့ရသဖြင့်
သူ့သမီးပျောက်သည့် အမှုကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် လူပျောက်မှုဖြင့်
တိုင်တန်းအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်ရှာဖွေ နေခဲ့သည်ဟု ရဲဌာန၏ မှတ်တမ်းတွင်
မိန်းကလေးငယ်အိမ်မှ ပျောက်သွားပြီး ၁၄ ရက်အကြာ သြဂုတ်
၂၃ ရက် နံနက်တွင် သူ့မိဘများကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်မှ
အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး သူ့သားနှင့်အတူ သူ့အိမ်တွင်
မိန်းကလေးငယ်ရောက်ရှိ နေကြောင်း အကြောင်းကြားလာသဖြင့် ဖခင်က သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။
မိန်းကလေးငယ်က ၎င်းကို ကျိုက္ကဆံဘုရားတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသည့် မောင်ဩဩဩ..က
အလုပ်သွားရာ လမ်းတွင် စက်ဘီးဖြင့် စောင့်ကြိုနေပြီး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်၍
သူ့နေအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ သားမယားပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူကို
ပြန်ပြောပြသည်ဟုလည်း ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဖခင်ကလည်း မောင်ဩဩဩကို သြဂုတ် ၂၄ ရက်၌ သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းတွင်
တိုင်တန်းလိုက်ပြီး ရဲစခန်းက အမှုအမှတ်(ပ) ၃၅၃/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု
ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့သူကိုမူ ရဲဌာနက စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး ဖမ်းမိပါကလည်း
သူ့ကို ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ အဓမ္မကျူးလွန်မှုဖြင့်
တရားစွဲနိုင်ချေရှိသည်ဟု တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိသည်။
ချဲ ထီ နဲ့ လောင်းကစားတွေ ဖမ်းဖို့ သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်ထုတ် ၊ ပြည်ထဲ ရေး ဝန်ကြီးက ကာချုပ်အမိန့်မရရင် မလုပ်နိုင်ဟု ငြင်းဆို
တရားမဝင် ချဲထီ နဲ့ လောင်းကစားမှုတွေဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အဓိက အဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး သမ္မတက အထူးကြပ်မတ် အရေးယူဖို့ ညွှန်ကြားလွှာထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ၊
အဲဒီညွှန်ကြားလွှာကို မွေးရေကျေး ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို ကို သွားပေးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောတယ် ၊
အဲဒီမှာတင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ဒီကိစ္စကို ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဆီက ညွှန်ကြားချက် မရမချင်း စမလုပ်နိုင်ကြောင်း ၊ ဒီအတိုင်း တကယ်လျှောက်ဖမ်းလိုက်ပါက ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အငြိမ်းစာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ နဲ့ ပါ ထိပ်တိုက်တွေ့လာနိုင်ကြောင်း ၊ ဒီနေရာမှာ
သူ ကြားအညပ် မခံနိုင်ကြောင်း ပြန်ပြောတယ်လို့ သိရပါတယ် ၊
တကယ်တမ်းပြောရရင် အဲဒီ ချဲထီ နဲ့ လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ် ၊ ဒါတင်မကပါဘူး ပြည်နယ်တိုင်းမှာ အုပ်ချုပ်သူတွေ ဝန်ကြီးချုပ်တွေအထိ ဆပ်ကြေးတွေ မျှယူနေတဲ့
သက်တော်ရှည်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ် ၊
ဒီတစ်ခေါက်တော့ သမ္မတနဲ့ ကာချုပ်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီလို့ ထင်ပါတယ် ၊ သမ္မတကြီးက မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့ တကယ်လုပ်မှာလား ၊ နိုင်ငံခြားက ပိုက်ဆံတောင်းကောင်းအောင် အပေါ်ယံ အရေပြား အယားပြေလုပ်မှာလား ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်ကြည့်ကြရပါမယ် ၊
မြန်မာပြည်က ကျနော့် အစ်ကိုအစ်မတွေ မနက်မနက် ဈေးသွားရင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားရင် ချဲထိုးလို့ရသေးလား ဘောလုံးပွဲလောင်းလို့ရသေးလား မေးကြည့်ကြရအောင် ၊ သမ္မတကြီးရဲ့ ညွှန်ကြားချက်က တကယ်လား အင်လား သိရတာပေါ့ ၊
ဒါ နဲ့ မြန်မာပြည်စံတော်ချိန် နဲ့ ဆို ဒီနေ့ည မန်ယူ နဲ့ ချဲလ်ဆီး ပွဲမှာ ဘယ်ဘက်က ဘယ်ကြေးပေါက်နေသလဲဟင် ....................
တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံမြို့၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ မိဘများက တိုင်ကြားမှု များကြောင့် ကျောင်းသားများကို ဆိုဆုံးမရန် အခက် ကြုံလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာမ အချို့က ပြောကြားသည်။
ကျောင်းသား မိဘများက ဆရာမများ၏ ဆိုဆုံးမမှုများကို ဝေဖန် စိစစ်ခြင်း မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကလေးများ၏ ပြောကြားချက်ဖြင့်သာ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးသို့ မကြာခဏ တိုင်ကြားမှုများကြောင့် ကျောင်းသား များကို စာသင်ကြားမှုနှင့် ပြောဆို ဆုံးမရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း အဆိုပါကျောင်းမှ အလယ်တန်းပြ ဆရာမ တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
တိုင်ကြားမှုများကြောင့် လတ်တလောတွင် မှန်သည် မှားသည်ထက် ပထမဦးဆုံး သွားရောက် ဖြေရှင်း ရသဖြင့် အချိန်ကုန်ခြင်း၊ လမ်းစရိတ်နှင့် အခြားသော စရိတ်များ ကုန်ကျမှုများ ရှိကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“တပည့်ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဆုံးမတာကို ဘာကြောင့် အပြစ်လို့ ဆိုချင်ကြ တာလဲ၊ ဆရာ့ ကျင့်ဝတ်ထဲက ပဲ့ပြင်ဆုံးမဆိုတဲ့ စကားက ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိတော့ပါဘူး။ ဒီလိုဆို အနာဂတ် ပညာရေး အတွက် ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု အလယ်တန်းပြ ဆရာမ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကျောင်းသားများကို ဆိုဆုံးမမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှု မရှိပါက မိဘနှင့် ဆရာတို့ နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံကာ မိမိ ကလေး၏ အားနည်းချက် အားသာချက်ကို ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ဥက္ကံမြို့ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းရှိ မိဘဆရာ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“သူတို့ တိုင်စာရောက်လာရင် အတိုင်ခံရတဲ့ ဆရာနဲ့ ကျောင်းသား မိဘများ ကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပါတယ်” ဟု အဆိုပါ ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်သောင်းရက ရှင်းပြသည်။
ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမကို တိုင်ကြားမှုသည် ယခင်နှစ်ထက် ယခုနှစ်တွင် ပိုမို များပြားပြီး မိဘအချို့၏ တိုင်ကြားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့ မရေတွက်နိုင်အောင် များပြားလျက် ရှိကြောင်း၊ ဥက္ကံ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၅ ဦး၊ မူလတန်းမှ ဒသမတန်းအထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၅၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း ယင်း ကျောင်းထံမှ သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဘင်္ဂါလီများ နေထိုင်သည့် အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်မှ ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀၀ ကျော်ကို ၎င်းတို့ ဆန္ဒအရ သက္ကယ်ပြင်ကျေးရွာ အနီးတွင် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံများသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေး ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဦးလှဟန်က ပြောကြားသည်။
ဘင်္ဂါလီများက ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် တောင်းဆိုသဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ပေးရခြင်း ဖြစ်ပြီး အစိုးရက အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ အဆောက်အအုံများသို့ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ဘင်္ဂါလီ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၄၉ စု (လူဦးရေပေါင်း ၁၂၃၀ ဦး) ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက် ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဘင်္ဂါလီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြောင်းတာပါ” ဟု ဦးဦးလှဟန်က ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများသည် အောင်မင်္ဂလာနှင့် အဆိုပါနေရာ အနီးတစ်ဝိုက် တွင် နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒုက္ခသည် ဖြစ် သွားကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံ ပြောဆိုသည်။
နေရာ အခက်အခဲနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲကြောင့် ၎င်းတို့ ဆန္ဒ အလျောက် ပြောင်းရွှေ့ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး မပြောင်းရွှေ့လို၍ ကျန်နေသူ အနည်းငယ် ရှိနေသေးကြောင်း အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးသို့ စောင်း၍ ညပေါင်းများစွာ အိပ်စက် ခြင်းက မျက်နှာပေါ်တွင် အရေးအ ကြောင်းများပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဆယ်လ်မွန်ကဲ့သို့ ငါးများများစားပါ...
ဆယ်လ်မွန်နဲ့ အခြားသော ရေ အေးဒေသနေ ငါးအများစုမှာ ပရို တင်းပမာဏများစွာပါဝင်ပြီး၊ အရေ ပြားကို တင်းရင်းစေရာမှ အကူအညီ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Omega3fatty အက်စစ်ပမာဏများစွာပါ ၀င်တဲ့အတွက် အရေပြားကို အား ဖြည့်ပေးပြီး အရေးအကြောင်းများကို လျော့ နည်းစေပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ရာ၌ သဲကွဲစွာမမြင် ရလျှင် ခဏခဏမျက်မှောင်ကျုံ့၍ မကြည့်ဘဲ လိုအပ်ပါက မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်စသဖြင့် သုံးပေးသင့်ပါ တယ်။ နေကာမျက်မှန်သုံးခြင်းအား ဖြင့်လည်း မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှိ အရေ ပြား အားနေလောင်ပျက်စီးခြင်းမှကာ ကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် မျက်စိစွေ ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။
၄။ Alpha Hydroxy Acids ကဲ့သို့ သဘာဝအက်စစ်များက အရေပြား အပေါ်ဆုံးက ဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားနိုင်ရုံသာမက ချွေးပေါက်များ ကို ကျဉ်းစေပြီး မျက်စိတစ်ဝိုက်ရှိ အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်း စေပါတယ်။
၅။ မျက်နှာကို ခဏခဏမသစ်ပါနဲ့...
မျက်နှာခဏခဏသစ်ခြင်းက သဘာဝအဆီဓာတ်များကို ဆုံးရှုံးစေ ပြီး အရေးကြောင်း ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါ တယ်။
၆။ ဗီတာမင် စီ ပါဝင်သော ခရင်မ် များများသုံးပါ...
အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ နောက်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိသူကို ရဲဝန်ထမ်းတွေ ခေါ်ဆောင်လာစဉ်။ (သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၃)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ အမျိုးသမီး ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တဦးကို အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ရဲကအလိုရှိနေတဲ့ လူ ၅ ဦးထဲက နောက်ဆုံး တယောက်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။
မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ ပထမ ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ သံသယရှိသူကို မြို့တော် နယူး ဒေလီမှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ရဲတွေက ဖမ်းမိခဲ့တာပါ။
သံသယရှိတဲ့ လူတွေထဲက တဦးရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက အခုနောက်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိသူဟာ အသက်မပြည့် သေးတဲ့ လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရဲတွေကတော့ သူ့ရဲ့ အသက်အမှန်ကို သိရဖို့ စုံစမ်းနေ ပါတယ်။ ပြစ်မှုကို သူတကယ် ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရ ပြီး အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူဖြစ်ရင် သူဟာ တခြားသူတွေထက် ပြစ်ဒဏ် ခံရမှု လျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့က အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူ အမျိုးသမီးဟာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်အရွယ်ပဲ ရှိသေး တာဖြစ်ပြီး အခုဆေးရုံမှာ အခြေအနေ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိအောင် ထိန်းထားနိုင်ပြီလို့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ နယူးဒေလီမြို့မှာ အုပ်စုလိုက်ဓမ္မပြုကျင့်တာ ခံခဲ့ရသူကတော့ သေဆုံးသွား ခဲ့ပြီး အခုထိ အဲဒီအမှု မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက် အိန္ဒိယအစိုးရက အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ပြင်းထန် တဲ့ ပြစ်ဒဏ် တွေပေးဖို့ ဥပဒေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်(သို့) အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်လာမယ့် အမျိုးသမီးတို့ အတွက် စေတနာဆောင်းပါးလေးပါ
ရှည်လို့ မဖတ်ဘဲမနေပါနဲ့ အရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်
လူမှုရေးအဆောင်အုံရဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ရပ် သည် အိမ်ထောင် ထူထောင်ခြင်းပါပဲ ။ လူဆိုတာ ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး အိမ်ယာထူထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ တစ်ခုကိုလည်း ခိုင်လေးတို့ ကြားနေကြရအုံးမှာပါ ။ လူတွေ ဘာကြောင့်အိမ်ယာထူထောင် အိမ်ထောင်ပြုကြသနည်း။
လူတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတော့ အခိုင်မာ ရှိကြမှာပါ ။ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက် ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါစေ အိမ်ထောင်ဘ၀ ကို တည်ထောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ လူပျို အပျိုဘ၀ နေခဲ့ပြုခဲ့တဲ့ လွပ်လွတ် မှုတွေကို အဆုံးသတ် သင့်တာတွေကို အဆုံးသတ်ပစ်လိုက်ရပါတော့တယ် ။ ဘ၀နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ကြတဲ့နေရာမှာ နားလည်မှုဆိုတဲ့ စကားလေးက သိပ်ကိုအရေးပါ အရာရောက်စေပါတယ် ။ ဒီစကားလေးက “ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ဆိုတဲ့ “ ဆိုတဲ့ စကားလေးလိုပါဘဲ ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်သူဘ၀ထက် ပိုကြင်နာပါ ။ ပိုသစ္စာရှိပါ ။ ဇနီးမယားကောင်းတို့မည်သည် လင်ယောကျာ်းပင်ဖြစ်ပါစေ မောင် ကြီး မောင် ငယ်ကဲ့သို့သဘောထားကာ ကျင့်ကြံနေထိုင်တတ်ကြပါတယ် ။ မန်လည်ဆရာတော် ရေးသားသော မယဒေ၀လင်္ကာပိုဒ်ရေ (၂၉၆) တွင်
“ မိန်းမဟူသည် ၊ ရုပ်ရည်အဆင်း
အချင်းဇာတိ ၊ ပြည့်စုံရှိလျက်
ဟီရိသြတ္တပ် ၊ ထိန်းကွပ်ကိုယ်မှာ
တည်စပါက ၊ ရတနာတဆူ
မြောက်ကျွန်းသူနှင့် ၊ နတ်တူသမျှ
ဂုဏ်ထွန်းပ၏ ။ ။
ဟုရေးသားထားတာကို ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကြင်လင်မယားဆိုသည်မှာ ဆိုးတူကောင်းဖက်၊ ဘ၀ခရီးလမ်းကို အတူတကွ လျှောက်လှမ်းကြသော ရဲဖော်ရဲဖက်တွေဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး ။ အတူနေလာတဲ့ ရက်တွေများ လာလေ ငြီးငွေ့လာလေဆိုတာမျိုး လုံးဝကိုမဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူး။ အတူနေတဲ့ ရက်တွေများလာလေလေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် “ ပိုပြီးနားလည်ခွင့်လွတ် တတ်လာရမယ် “ ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ အိမ်ထောင်စီးပွားေ၇းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ ဇနီးသည်အနေနဲ့လည်း လင်ယောကျာ်းကို အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရမယ် ၊ ကိုင်တွယ်တတ်ရမယ် ။
အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကိုလည်း ၀င်ရောက်ချုပ်ကိုင်ချယ်လှယ်တာ မျိုးတွေ မလုပ်မိစေဖို့ အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ် ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက် လုပ်ရမယ့် တာဝန်ကို သူဘာသူ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်တတ်ပါစေ ။ နေရာတကာမှာ မိန်းမက ချုပ်ကိုင်ဆရာလုပ် လွန်းပြန်ရင်လည်း မိမိတို့ ခင်ပွန်းလင်ယောကျာ်းတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတဲ့ အရည်ချင်းတွေ ပျောက်ကွယ်ပြီး နောက်လိုက်လုံးလုံးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် ။ ဘေးကနေ လမ်းညွှန်အကြံပေးခြင်းမျိုး ၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ထောက်ပြခြင်း မျိုးတွေကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းက မိမိခင်ပွန်းသည်ကို အမှန်တကယ် ကူ ညီခြင်းစစ်မှန်စေပါတယ် ။
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများအနေဖြစ်လည်း ပညာတွေ ဘယ်လောက်ဘဲ တတ်နေပါစေ ၊ ဥစ္စာတွေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာနေပါစေ မိမိတို့ ချက်ပေးသော ပြင်သောထမင်းဝိုင်းကိုသာ မိမိတို့ ခင်ပွန်းသည်တွေက မက်မောတတ်ကြတယ်ဆိုတာကို မမေ့စေချင်ပါဘူး ။ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက် တာဝန်တွေကို လိုလေးသေးမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ကို မမေ့ကြစေချင်ပါဘူး ။ ခုခေတ်မှာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းကာ စီးပွားရှာနေကြတာမို့ အိမ်ထောင်တာဝန်တွေကို လစ်လျှင်ရှူနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေ အများပြားရှိနေကြပါတယ် ။ တူတူ အလုပ်ခွင်မှာ ပင်ပမ်းကြတယ်ဆိုတာပေမယ့် မိမိခင်ပွန်းသည်တာဝန်တွေကိုတော့ မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးပြုစုခြင်းက အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ ရန်သူကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုပါပဲ ။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ရှိတတ်တဲ့ ပြသနာလေးတွေ များစွာရှိပါတယ် ။
နံပတ် ( ၁ ) …. အိမ်အသုံးစရိတ်နဲ့ ၀င်ငွေ မမျှတတဲ့အခါမှာ ကြွေးမြီပြ သနာတွေ ၀င်လာတတ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ အိမ်ထောင်ရှင် မတွေ က ငွေရှိတုန်းဝယ်ထားချင်တတ်ကြတယ် ။ မ၀ယ်လဲ ဖြစ်တာကော အဖက်တင်တာပေါ့ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ ၀ယ်ထားတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီအတွေးဟာ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပေမယ့် ငွေကြေးလက်ထဲ ရှိနေခြင်းကတာ အရာရာကို ဖလှယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုမေ့နေ တတ်ကြပါတယ် ။ အကြွေးတင်ခံတဲ့အထိ အဖက်တင်အောင် ၀ယ်ထားဖို့တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ၀င်ငွေ အပေါ်ကို ကြည့်ကာ ထိုက်သင့်အားလျော်စွာ သုံးတတ်ဖို့တာဝန်က အိမ်ထောင်ရှင်မတွေရဲ့ အရေးကြီးဆုံးတာဝန်တစ်ရပ်ပါဘဲ ။
ခင်ပွန်းသည်တွေအနေနဲ့လည်း အိမ်ထောင်တာဝန်ဆိုတာ ကို ကျေ ပွန်အောင် လိုအပ်သည်ကို လောက်ငှအောင် ရှာဖွေပေးရပါမယ် ။အိမ်သူ သက်ထားကလည်း ကောင်းမွန်စွာ စီမံပြီး စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်မယ် ။ ယောကျာ်းဖြစ်သူကလည်း ကြိုးစားရှာဖွေမယ် ၊ ဒီကြားထဲကမှ မပြေလည်မှုတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အပြစ်မပုံချဘဲ တိုင်တိုင်ပင်ပင် အဖြေရှာဖြေရျင်းတတ်မယ်ဆို အရမ်းကို အဆင်ပြေမယ့် မိသားစုဘ၀လေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နံပတ် ( ၂ ) ….အိမ်ထောင်တစ်ခု သက်ဆုံးတိုင် လက်တွဲသွားစေဖို့ဆို တာက နားလည်မှုရှိနေဖို့က အထူးလိုအပ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ရင်သွေးရတနာဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးဆိုတာ မှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သားသမီးမရနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း ရှိနေတတ် ပါတယ် ။ ဒီလို အိမ်ထောင်ရေးမျိုးတွေမှာ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ မယုံကြည်စိတ်တွေ များတတ် ကြပါတယ် ။ အိမ်ထောင်တစ်ခု ခိုင်မြဲနေဖို့ သာယာနေဖို့ဆိုတာ သားသမီးရခြင်း မရခြင်းက အခြေခံမကြလှပါဘူး ။
သားသမီးမရလို့ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေစကားဟာ သိပ်ကိုစိတ် ဓာတ်ရေးရာ သိမ်ဖျင်းတဲ့ လူတွေ ပြောတတ်တဲ့ မခိုင်လုံမလှပတဲ့ ဆင်ခြေတစ်ခုပါ ။ သူတို့ ဖောက်ပြန်ဖို့အတွက် အသုံးချတဲ့ စကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ ဒီအတွက် ကလေးမရနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေ အနေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ ၊ လိုတာထက် ပိုတဲ့ ချုပ်ချယ်မှုတွေက မိမိတို့ ခင်ပွန်းသည်တွေကို မိမိဘေးကနေ တွန်းထုတ်သလို ဖြစ်သွား တတ် တယ် ဆိုတဲ့ အချက်လေးကို သတိပြုမိစေချင်ပါတယ် ။ မိမိခင်ပွန်းသည်ကို မိမိနားမှာ နေစေချင်ကြတာ အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းကလေးတိုင်း တူညီတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပါပဲ ။ နေစေချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ပြည့်စေဖို့ ဇွတ်အတင်းချုပ်ချယ် တဲ့နည်းထက် သူကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ဘေးမှာ နေချင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းက ပိုလို့ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။ မိမိဆန္ဒတစ်ခုအတွက် သူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အားလုံးကို ဘောင်ခတ်လိုက်သလို မဖြစ်စေဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ် ။
နမူနာပေါ့နော်…………….သူက ညဘက်ဆို လက်ဘက်ရည်ဆိုင် သွားချင်မယ် ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ ယောကျာ်းလေးတိုင်းထိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒါကို စိတ်မချလို့ သူငယ်ချင်းတွေ စုံလာရင် ဘာတွေ မဟုတ်တာလုပ်မ လည်းဆိုတဲ့ မရေရာတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ချုပ်ချယ်မယ့်အစား မိမိပါ လိုက်သွားခြင်း ဒါမှမဟုတ် အချိန်လေးတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း တို့ကို ပြုမှုဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ် ။ စကားဆိုတာ ပြောတတ်ရင် နားဝင်ချိုစေတဲ့ စကားလုံးတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ “ အကိုရေ ကျွန်မတော့ မှောင်ရင်မနေရဲဘူးနော်လို့ ၊ အကို ပြန်မလာမချင်း ကျွန်မက စောင့်နေရမှာလေလို့ ၊ မနက်ကို အလုပ်တွေရှိ တယ်လေ စောစောလေးတော့ ပြန်လာနော်လို့ “ ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေက သူတို့တွေကို ပြန်လာဖို့ နှိုးစက်ပေးတဲ့ စကားလေးတွေပါပဲ ။ မသွားနဲ့ဆို ပိုသွားချင်တယ် ၊ မလုပ်နဲ့ဆို ပိုလုပ်ချင်ကြတာ လူ့သဘာဝလေးပါ ။ မလိုအပ်တဲ့ ချုပ်ချယ်မှုတွေကို ဆိုးကျိုးတွေကို သယ်ဆောင်လာစေတတ် တယ်ဆိုတာကို အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေ မမေ့ထားစေချင်ပါဘူး ။
နံပတ် ( ၃ ) ……. ကျွန်မတို့ မြန်မာမိန်းကလေး တော်တော်များများဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုတာနဲ့ ဖြစ်ကလက်ဆန်းတော်တော် နေပြစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ကယ်တော့ လုံးဝကို မဖြစ်သင့်ပါဘူး။အမှန်ဆို အိမ်ထောင် ကျတဲ့ သူတွေဟာ အပျိုထက်ကို လှလှ ပပ လေး နေရမယ်လို့ ခိုင်လေး ကတော့ ယူဆမိပါတယ် ။ဘာလို့လဲဆိုရင် အပျိုမှာအပျိုဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ တင် တော်တော် လှနေပါပြီ။ အိမ်ထောင်သည်တွေက ကိုယ်ယောကျာင်္းရဲ့ မျက်စိထဲမှာ အမြဲလှနေဖို့ မရိုးသွားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
အိမ်ထောင်တာဝန်တွေကို ကျေပွန်ခြင်းဟာ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင် နိုင်စေသလို ၊ လှပသန့်ရှင်း နေစေခြင်းဟာလဲ အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးပါဘဲ။ ခုဆို (နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါနော်) တားဆေးတွေ ဟာ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀ ကို အရမ်းဝစေတတ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ မိန်းကလေးတော်တော်များဟာအလွန်မင်းဝလာတတ်ကြပါသည်။ ဒါကိုလဲ သတိထားရပါ့မယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပုံစံတွေ စရိုက်တွေကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ထေရာတည်း တူနေတဲ့ အချက်တော့ ရှိကြတယ် ။
အဲဒါဘာလဲ ဆိုတော့ ယောကျာင်္းတိုင်း လိုလို အလှအပကို သဘောကျ ခံစားတတ်ခြင်း နဲ့ နားပူတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတာပါဘဲ ။ ဒီအချက်တွေကို ကျွန်မတို့တွေကလည်း ကောင်းကောင်းကို အသုံးချတတ်ကြပါတယ်။ လိုချင်တာကို နားပူအောင် ပြောတတ်တာလဲ မိန်းကလေးတွေရဲ့ တူညီတဲ့ အချက် ဖြစ်နေပြန်တယ် ။အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာဖို့ဆိုတာ တစ်ကယ်ကို သေချာပြင်ဆင်ရပါတယ် ။
မတူညီတာတွေ တော်တော်များများကို ယူပြီးမှ သိရတတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျစရာ မလိုပါဘူး ။ တကယ်ဖူးစာပါလို့ ပေါင်းဖက်နေရပြီးမှ မတူတာကို နားလည်မှုတစ်ခုနဲ့ ရအောင် ညှိုနှိုင်းနိုင်ရမယ် ။ ကို့ယ်ယောကျာင်္းအကြိုက် ကိုယ့်ယောကျာင်္း စိတ်သဘောထားကို အိမ်သူသက်ထား အမျိုးသမီးများ အသိဆုံးပါ ။ တူတူ နေနေကြတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ဆိုရင်လဲ တစ်နေ့လုံး ဘယ်လို ၀တ်နေနေ ကိုယ်အမျိုးသား အလုပ်က ပြန်လာခံနီးအချိန်တွေ မှာတော့ ရေချိုးမယ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဝတ်မယ် ။ ကိုယ်ကို မြင်လိုက်လို့ အမောပြေစေမယ့် အနေထားမျိုးလေးတော့ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ် ။
မိန်းကလေးတိုင်း အလှကိုယ်ဆီ ရှိတတ်ကြပါတယ် ။ မလှတဲ့ သူဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ခိုင်လေးကတော့ မြင်မိပါတယ် ။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့နဲ့ ၀တ်တတ်စားတတ်ဖို့ဘဲ အရေးကြီးပါတယ် ။ အဖိုးတန် အ၀တ်စားတွေကို ၀တ်မှ လှတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တာလေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်မယ်ဆို လှပတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အဖြစ် ခင်ပွန်းသည်က အချစ်တိုးစေမှာပါ ။ ပြင်ရမယ်ဆိုလို့ မလိုက်ဖက်တာကို အတင်းပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် ။ နမူနာပေါ့နော် မိတ်ကပ်နဲ့ မလိုက်တဲ့သူက မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းထားမယ်ဆို မလှသလိုမျိုးပေါ့ ၊ ကိုယ်ဘာနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာ ကိုကိုယ်ကို သိနိုင်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာပျော်ရွင်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်မတို့ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေပါတယ် ။ သူတို့အတွက်က ငွေရှာတာနဲ့တင် အရမ်းပင်ပမ်းနေပြီလို့ တွေးတတ် ကြတာပါ။ ဒါကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ ။ သူတို့အတွက် ဖြည့်စီးပေးဖို့ လို့မှတ်ယူလိုက်တာ အေးချမ်းပါတယ် ။
တရားတာ မတရားတာတွေ ထည့်မတွေးဘဲ စေတနာရောင်ပြန်တယ် ဆိုတာလေးကိုရင်ထဲ ထည့်ထားပြီး ကိုယ်ဘက်က လုပ်စရာ ရှိတာလေးကို လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းက 2ယောက်စလုံးအတွက် အေးချမ်း ပျော်ရွင်စေ ပါတယ်။ဒီတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ငါတော့ အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်သွား ပြီ ဖြစ်သလိုနေလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို အဝေးကို မောင်း ထုတ်လိုက်ပါ ။ သူတို့အတွက် တင်မကပါဘူး ကိုယ်အတွက်ကို လှဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ မိုးလင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံး ကိုယ်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးကို အရင်လုပ်မယ် ။ သနပ်ခါးလိမ်း ပြီးမှ လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်လို့ရပါတယ်။ လုပ်စရာရှိတာတွေ အရင်ဆုံး လုပ်နေတာနဲ့ တစ်နေ့တာလုံး ကိုကိုယ်ကို ခေါင်းဖီးဖို့တောင် မေ့သွားတတ်ကြတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် မမတွေ အများကြီးပါ ။ အိပ်ယာကနိုးတာနဲ့ ကိုယ်ကို သပ်ရပ်ဖိုပြင်ဆင်တာ ကြာလှ အများဆုံး မိနစ် 20 ပေါ့ ။ ဒီလောက်အချိန်တော့ ပေးသင့်ပါတယ် ။ ဒါလေးတွေကို သေးသေးလေးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ၊ တစ်ကယ်လုပ် ကြည့်ပါ ထိရောက် အကျိုးရှိစေ တယ်ဆိုတာကို နားလည် လာကြပါလိမ့်မယ် ။ မိမိခင်ပွန်းသည် အလုပ်ကနေ ပြန်လာတိုင်း ခရီးဦးကြိုပြုတတ်တဲ့ အလေ့ထလေးကို ပြုလုပ်ပေးပါ ။
နောက်ဆုံး အကြံပေးချင်တာလေးကတော့ တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် နေ့တိုင်း တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်တွဲကာ လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ အလေ့ကျင့်လေးကို ကျင့်သုံးပေးပါ ။ အလုပ်ကပြန်လာမယ် ။ ရေချိုးပြီး ကာစအချိန်ဆိုတာ စိတ်ကို အင်မတန် လန်းဆန်းနေစေတဲ့ အချိန်မျိုးပါ ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်ရင်း ပြောစရာရှိတာတွေ ကို ပြောမယ် တိုင်ပင်စရာတွေကို တိုင်ပင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်လျော်ဆုံးအချိန်ပါပဲ ။
မိမိတို့ ခင်ပွန်းသည်တွေ အတွက် ပါရမီဖြည့်ဖက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေ ။ အမိနှင့်တူသော ဇနီးမယား ၊ အမ နှမ နှင့်တူသော ဇနီးမယား ၊ အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသောဇနီးမယား၊ တွေ ဖြစ်ကြပါစေ ။ ဘ၀ခရီးဖော်တိုင်း ချမ်းမြေ့ပျော်ရွင်သော မိသားစုဘ၀တွေကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ ။ နားလည်မှု လက်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာတွဲလို့ သက်ဆုံးတိုင် သစ္စာတရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းများစွားဖြင့် ဘ၀ခရီးကို အတူတကွ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ ။
အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုက အထီးကျန်ဖြစ်စေကြောင်း ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်ဖွင့်ဟ
အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုသည် ဘဝတွင် အထီးကျန် ရပ်ဝန်း တစ်ခုကို ဖြစ်တည်စေကြောင်း ရောဘတ် ပက်တင်ဆန်က ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ အသက်(၂၇)နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ဗြိတိသျှ ရုပ်ရှင်မင်းသားသည် Twilight ဇာတ်ကားများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ကမ္ဘာသိ အနုပညာ ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိလာခဲ့သလို Twilight ဇာတ်ကားမှ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ခရစ္စတန် စတီးဝပ်နှင့်လည်း ချစ်သူများ ဖြစ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ခရစ္စတန်၏ လူမှုရေး အရှုပ်အထွေးများကြောင့် နှစ်ဦးသား လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ စပိန်ထုတ် GQ မဂ္ဂဇင်းက ရောဘတ်၏ ဘဝတွင် အောင်မြင်မှုများကို မည်သို့ သဘောထားကြောင်း မေးမြန်းရာ ၎င်းက အထီးကျန်ကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀င်/ထွက်ပေါက်များအဖြစ် ယခုလအတွင်း သတ်မှတ်မည်
တာချီလိတ်မြို့အနီး ရွှေတြိဂံဒေသတွင် လာရောက်လည်ပတ်နေသည့် ခရီးသွားအချို့ကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ သဘောတူညီချက်အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၈ ရက်မှစတင်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀င်/ထွက်ပေါက်အဖြစ် သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
သတ်မှတ်သွားမည့် နယ်စပ်များမှာ တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်၊ မြ၀တီ- မဲဆောက်၊ ထီးခီး-ဖူနာရွန်နှင့် ကော့သောင်း-ရနောင်းနယ်စပ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ပြည်ဝင်ဗီဇာ ပါရှိသူ မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ သားများနှင့် တတိယနိုင်ငံသားများကို ၀င်/ထွက်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀င်/ထွက်ပေါက်များမှ ၀င်ထွက်သူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှမဆို ပြန်လည်ဝင်/ထွက်သွားလာခွင့် ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ရန် လျှောက်ထားရယူခဲ့သည့် ဗီဇာအမျိုးစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော နေခွင့်သက်တမ်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဗီဇာနှုန်းထားများမှာ ယခင်သတ်မှတ်ချက်များ အတိုင်းသာဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များတွင် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာများကို လတ်တလော အခြေအနေရ ထုတ်ပေးခြင်း မပြုသေးကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လ၀က်အတွင်း ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကန့်သတ်နယ်မြေများမှလွဲ၍ ကျန်နယ်မြေ ဒေသများသို့ သွားလာနိုင်ပြီး အဆိုပါ ကန့်သတ်နယ်မြေ စာရင်းများကို နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
တရုတ်-အမေရိကန် ဘီလျံနာကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီး
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရုတ်- အမေရိကန်ဘီလျံနာသူဌေးချားလ် ရှူးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ချားလ်ရှူးသည် ဘလော့ဂ် ဂါတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူပေါင်း၁၂သန်း ကို စိတ်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင် သိမ်းသွင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပြည့်တန်ဆာ မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့် ဖမ်း ဆီးခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြော ကြားခဲ့သည်။ ချားလ်ရှူးကိုဖမ်း ဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းက တရုတ် နိုင်ငံရှိ ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ များအား ထိန်းချုပ်ခြင်းကို တရုတ် အစိုးရက တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း လည်းဖြစ်သည်။
ချားလ်ရှူးသည် တရုတ် နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးဘ လော့ဂ်ဂါများထဲမှ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဘီလျံနာသူဌေးချားလ် ရှူးသည် စိတ်အားထက်သန် သော ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးအကျယ် လူကြိုက်များလှသော Sina Weibo ကဲ့သို့သောတွစ်တာတွင် ဖမ်းဆီး ခြင်းမခံရမီက သူ၏ နောက်ဆုံး သတင်းအမှာစကားကို တင်ထား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ချားလ်ရှူးကို ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Sina Weibo တွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ လွှမ်း မိုးနေခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ အ လားတူပင် ကောလာဟလသတင်း များပျံ့နှံ့စေရန်နှင့် လုပ်ကြံဇာတ် လမ်းများဖန်တီးနေသည့် News Express အတင်းအဖျင်းသတင်း စာဂျာနယ်လစ်ကိုလည်း ဥပဒေ အရဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
လျူ အမည်ရှိဂျာနယ်လစ်သည် အွန် လိုင်းပေါ်မှနေ၍ ချုံကင်းဒုတိယ မြို့တော်ဝန်ဟောင်းမာကျင်း ကျိသည် မြို့တော်ရှိ အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်မှုတွင် ယွမ် ငွေသန်းများစွာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေ သော တာဝန်လစ်ဟင်းသူအဖြစ် စွပ်စွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အာဏာပိုင် တို့ကမူ အွန်လိုင်းပေါ်မှ နောက် လိုက်နောက်ပါအင်အားများပြား စွာရှိနေသော အင်တာနက်နာမည် ကျော်များအနေနှင့် ကိုယ့်ကျင့် တရားပိုမိုထားရှိရန်နှင့် အွန်လိုင်း ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရန်ပြော ကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အစာစားနည်း လျှို့ဝှက်ချက်များ
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အစာစားနည်း
ပြင်သစ်လူမျိုးတွေက ဘဝမှာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျော်ကြားပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ သူတို့ဟာ ဗြိတိန်လူမျိုးတွေနဲ့စာရင် အဝလွန်မှု လျော့နည်းပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း လည်း လျော့နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ အနှစ်သက် ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝိုင်နီဟာ အသင့်အတင့်သောက်ရင် နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း ကို လျော့ကျစေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တချို့က ယုံကြည်ကြ ပါတယ်။ ဝိုင်နီထဲက ဖလေဗိုးနွိုက်ဟာ သွေးခဲတွေကို ချေဖျက်ပေးပြီး သွေးခဲ စုပုံမှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးပါတယ်။
ဝိုင်နီဟာ ဝိုင်ဖြူထက် ဖလေဗိုးနွိုက်ပါဝင်မှု ၁၀ ဆ ပိုများတယ်လို့လည်း အာဟာရပညာရှင်တွေက ဆိုပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝိုင်ကို များများသောက်ရင် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ပြင်သစ် လူမျိုးတွေက သရေစာကို အစားနည်းပြီး ဘီစကွတ်မုန့်၊ အာလူးချောင်းကြော်စတဲ့ သရေစာကို တကြွပ်ကြွပ် ဝါးစားတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ အစာစားပြီးတဲ့အခါ အစာကို နည်းနည်းပဲ စားတတ်ပါတယ်။ ထမင်းစားချိန် မှာ ထမင်းစားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး အချိန်ကြာကြာပေးကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း စားတတ်ကာ အစာတစ် လုတ်နဲ့ တစ်လုတ်ကြား ရပ်နားတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်ပြည့်တယ်လို့ ထင်တဲ့အခါ ရပ်ပြီး အစာချေဖျက်ဖို့ အချိန်အလုံ အလောက် ပေးတတ်ပါတယ်။
ချိစ် (Cheese) မှာ ပါတဲ့ လီနိုလိရစ်အက်စစ်ဟာ ရင်သားကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်သစ်လေ့လာမှုအရ လီနိုလိရစ်အက်စစ် ပမာဏမြင့်မားတဲ့ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ခုနစ်ဆခန့် လျော့နည်းကြောင်း သိရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် အနေနဲ့ ဒိန်ခဲထဲက အဆီနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ဟာ ခံတွင်းထဲက စံအဆင့်ကို ပြောင်းလဲစေကာ သွားပိုးစားမှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
မြေထဲပင်လယ် အနီးတစ်ဝိုက် ဒေသများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အစာစားနည်း
အီတလီတောင်ပိုင်းနဲ့ ဂရိဒေသတို့လို မြေထဲပင်လယ်ဒေသရှိ လူမျိုးတွေ နှ လုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း လျော့ကျရတဲ့ အချက်ကအဆီများတဲ့ ငါးကို များများ စားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ကရယ်ငါး၊ ဆာဒင်းငါးနဲ့ ဟာအင်းငါးတို့လို အဆီများတဲ့ ငါးတွေမှာ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ်လို့ ခေါ်တဲ့ မပြည့်ဝဆီ ပါဝင်နေတယ် လို့ အာဟာရပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ် ပမာဏများများ ရှိတာကြောင့် သွေးကြောစနစ် ကျန်းမာ ပြီး သွေးခဲမှုမဖြစ်အောင် ကူညီကာ နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေး ပါတယ်။ အမေရိကန် လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ငါးများများစား တာကြောင့် လေဖြတ်နိုင်ခြေကို ၅၂ ရာခိုင် နှုန်းနဲ့ အထက်လျော့ကျစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြေထဲပင်လယ်ဒေသခံတွေ အဓိကစားလေ့ရှိတဲ့ သံလွင်ဆီဟာ နှလုံးရော ဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါ တယ်။ သံလွင်ဆီမှာပါတဲ့ မပြည့်ဝဆီဟာ အနီရောင်အသားထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ပြည့်ဝဆီနဲ့ မတူပါဘူး။ ပြည့်ဝဆီ က သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောအဆင့် မြင့်တက်စေပြီး နှလုံးရော ဂါ ဖြစ်စေပေမယ့် မပြည့်ဝဆီ ဟာ သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော အဆင့်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အာဖရိကနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အစာစားနည်း
ပဲအမျိုးမျိုး၊ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ဟာ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေပါ တယ်။ အဲဒီလို အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ အစာကို စားလေ့ရှိတဲ့ အာဖရိက လူမျိုးတွေဟာ အူမကြီးနဲ့ အစာဟောင်း အိမ် ကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေတာကို အမေရိကန် လေ့လာမှုတစ် ခုအရ တွေ့ရပါတယ်။ ပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေက အူကျန်း မာရေး ကောင်း မွန်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီး ယားတွေ ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တွန်းလှန်ပေးပါ တယ်။ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်က အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆိပ်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်း တာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း လျော့ကျစေ ပါတယ်။
အခြောက်အခြမ်း ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပဲတွေကလည်း နှလုံးကျန်းမာစေပါတယ်။ ပဲအမျိုးမျိုးမှာပါတဲ့ အမျှင် ဓာတ်ဟာ အထဲမှာ ကိုလက်စထရောတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကက်သရင်းကောလင်းရဲ့ လေ့လာမှု အရ ပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေက အကောင်းဆုံး စွမ်းအင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာဖြစ်ကြောင်း၊ သွေး တွင်း သကြားဓာတ်အဆင့်ကို ဟန်ချက်ညီမျှစေတဲ့အပြင် စွမ်းအင်ရှိအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ကြောင်း သိရပါ တယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အစာစားနည်း
ဂျပန်နိုင်ငံသူတွေက တခြားနိုင်ငံသူတွေထက် ရင်သားကင် ဆာဖြစ်နှုန်း လျော့ကျမှု ရှိပါတယ်။ လေ့လာမှု အရ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်းပမာဏ များတာကြောင့် ရင်သားတစ်သျှူးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ကာ ဆဲလ်ပွား များမှုကို အားပေးကြောင်းနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ များကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုတို့ ခံရပြီး အီစထရို ဂျင်ဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆင့်အထိ မြင့်တက်လာတတ်ပါ တယ်။
ဂျပန်လူမျိုးအများစု စားတဲ့ ဟင်းလျာတွေထဲမှာ ပဲပိစပ်ပါဝင်တဲ့ အတွက် ဖိုင်တိုအီစထရိုဂျင်ဓာတ်ကို ရရှိစေပြီး အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းကို ဟန့် တားနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါက ဂျပန်နိုင်ငံသူတွေ ရင်သားကင် ဆာဖြစ်နှုန်း လျော့နည်းစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းပြချက်လို့လည်း ထင်မြင်ထားကြပါတယ်။ ပဲနို့မှာလည်း ဖိုင်တိုအီစထရိုဂျင် ပါဝင်နေပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အိုကီနာဝါကျွန်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အိုကီနာဝါ လူမျိုးတွေဟာ သက်ရှည်ကျန်းမာပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ သားဥအိမ်နဲ့ အူမကြီးကင် ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းနေတာကို ၂၅ နှစ်ကြာ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ သူတို့က တစ်နေ့မှာ မတူညီကွဲပြားတဲ့ အစားအစာ ၁၈ မျိုး၊ ထမင်းအများကြီး စားလေ့ရှိပြီး အဆီကို မဆိုသလောက် ပဲ စားကာ ဆားပါဝင်မှုက နည်းပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ စားလေ့ရှိတဲ့ ငါးအစိမ်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆူရှီဟာလည်း အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ် ပါဝင်တာကြောင့် သွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေပြီး နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန် လူမျိုးတွေဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အများအပြား စားလေ့ရှိ ပါတယ်။
-အိုကီနာဝါလူမျိုးတွေက တစ်နေ့မှာမတူညီတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီး ၁၀ မျိုးခန့် စားပါတယ်။ ကီဝီ သီး၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကစွန်းဥနဲ့ ငရုတ်သီးစတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
-အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံကို တစ်နေ့ ၇-၁၃ ခွက်ခန့် စားပါတယ်။
-တိုဟူး၊ ပဲပုပ်စေ့၊ နွားနို့နဲ့ ဒိန်ချဉ်စတဲ့ ကယ်လ်စီယမ်များတဲ့ အစားအသောက်ကို တစ်နေ့ လေးကြိမ် စားပါတယ်။
-အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ်ပါတဲ့ အစာကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်- သုံးကြိမ် စားပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး နဲ့ မက်ကရယ်စတဲ့ အဆီများတဲ့ ငါးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
-နေ့စဉ် ရေနဲ့ လက်ဖက်ရည် သောက်ပါတယ်။ အနီရောင်အသားကို ရှောင်ပြီးအရက်ကို အသင့်အတင့် သောက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ ရှောင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အစာစားနည်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေက အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ နို့ကို သောက်တာကြောင့် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေ ရရှိပြီး အူကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြပါ တယ်။ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေက ဆယ်လ်မွန်နဲလားနဲ့ တခြားပိုးမွှားတွေလို အစာအဆိပ်သင့်စေတဲ့ ပိုးတွေကို တွန်းလှန်ပေး ပါတယ်။ အူကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် တာကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာ အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ တခြား အစာဟောင်းအိမ် ရောဂါတို့ ဖြစ်နှုန်း နည်းပါတယ်။ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေစားတဲ့ သက်သတ်လွတ်အစာမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် များများပါတဲ့ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် စုပ်ယူကာ အရွယ် မတိုင်ခင် အိုမင်းမှုနဲ့ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်။
သုတေသနပြုချက်အရ ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်သူများသည် ကျန်းမာရေး အခြေ အနေကမောက်က မဖြစ်တတ် သည်။ အမျိုးသမီးများဆိုလျှင် ရာသီမမှန်ခြင်း၊ အရိုးပွရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်မရ ရှိနိုင်ခြင်း စသည့်ရောဂါများပိုမိုဖြစ်တတ်သည်။
ညသန်းခေါင် ည ၁၂-နာရီ ၁၀-မိနစ်အထိ မအိပ်သေးသူများတွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝဖြစ်ပျက်ပြောင်း လဲဖြစ်စဉ်များသည် ကိုယ်တွင်းအရည်လောင်ကျွမ်းမှုကိုသာအားကိုးရသည်။ကိုယ်တွင်းအရည် လောင် ကျွမ်းမှုသည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပေါ်မှုများတတ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်၏ ‘သက်စောင့်ရည်’ များကို အက်ဆစ်ဓါတ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခဏခဏအိပ်ရေး ပျက်ခံ သူများသည် ဆေးလိပ်သောက်၊ အရက်သောက်သူများဖြစ်နိုင်သည့်ရောဂါမျိုးများ ငါးဆပိုဖြစ်နိုင် သည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ်အတတ်နိုင်ဆုံး ည ၁၁-နာရီ မတိုင်မီ အိပ်ရမည်။
မဖြစ်မနေညအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်ဆိုလျှင်လဲ (အသားမပါသော) ညလယ်စာစားလျှင် ခံသာသေးသည်။ နံနက်အခါ နေထွက်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်လဲ သဘာဝ လောကကြီးတွင် တည်ရှိပြီး အချိန်မှန်မှန်၊စည်း ချက်ကျကျလှုပ်ရှားမှသာ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်မည်။
(အလယ်တန်းအောက် ကလေးသူငယ်များသည် ရောဂါခုခံကာကွယ်စနစ် တည်ဆောက်မှု မပြည့်စုံသေး သဖြင့် ည ၉-နာရီတွင်အိပ်နိုင်လျှင်ကောင်း၏)
ည ၁၁-နာရီ မှ နံနက် ၁-နာရီ = ရိုးတွင်းချဉ်ဆီမှ သွေးနီဥ တည်ဆောက်ချိန်
(ဆေးပညာတွင် ‘အန္တရာယ်များသည့်လေးနာရီ’ ဟုပြောစမှတ်ပြုကြသည်။ လက်တွေ့တွင် ဤအချိန်၌ ရင်ကြပ်၊နှလုံး၊ လေဖြတ်၊ဦးနှောက်ေ သွးကြောေ ရာဂါ၊သွေးတိုးရောဂါ စသည်တို့ ရောဂါဖောက်ပြန်သော အချိန်ဖြစ်တတ် သည်။ ထို့ကြောင့်အဘိုးအဘွားများ နံနက် ၅-နာရီကျော်မှကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလမ်း လျှောက် ထွက်သင့်သည်။)
(နေ့လယ် ၁-နာရီ မတိုင်ခင်နေ့လည်စာ စားလျှင်ကောင်း၏ – သို့မဟုတ်က အစာအိမ်ရောဂါလေထိုး လေအောင့် ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။)
ည ၇-နာရီမှ ည ၉-နာရီ = နှလုံးနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ အလှုပ်ရှား ဆုံးအချိန်
၂၃-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၆၃၀ အချိန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၃၀၄/၇)နှင့်(၃၀၅/၀)ကြားတွင် မိတ္ထီလာမှ မန္တလေးသို့ ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ကုက်္ကိုခါးလှရွာနေ မျိုးသူ(၃၈)နှစ် မောင်းနှင်သော ၁စ/xxxxဒိုင်နာအဖြူရောင်ယာဉ် သည် ၀ဲဘက်နောက်ဘီးပေါက်ပြီး လမ်းယာဘက်ဘေးမြေသားလမ်းပေါ်သို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့သည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ကုက်္ကိုခါးလှရွာနေ သန်းဦး(၁၈)နှစ်ပါ ၁၀ ဦးတွင် ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ဖူးရောင်၊ နဖူး ဖူးရောင်၊ ယာပခုံးနာကျင်၊ ယာမျက်ခုံးပေါက်၊ ၀ဲနားဖူးပွန်း၊ ၀ဲ/ယာနံဘေးအောင့်၊ ယာဒူးပေါက်ပြဲ၊ ၀ဲပါးပွန်းပဲ့၊ ခါးနာကျင်၊ ရင်ဘတ်နာကျင်၊ ၀ဲယာတံတောင် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများ အသီးသီး ရရှိသဖြင့် မိတ္ထီလာဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ပြီး ယာဉ်အားမဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ မျိုးသူအား သီးကုန်း အမြန်လမ်းရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၁၇/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၇/ ၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အိပ်ငိုက်ရောဂါကုသမှု၏ အစောပိုင်း အဆင့် သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့
သွေးထဲတွင် ပရိုတိုဇိုးဝါး ကပ်ပါးကောင် Trypanosoma gambiense ဝင်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်သော အာဖရိကအပူပိုင်းဒေသ ရောဂါဖြစ်သည့် အိပ်ငိုက်ရောဂှါူSleeping sickness ၏ အတွေ့ ရအများဆုံးပုံစံအတွက် ကုသမှု ဖန်တီးရာတွင် အစောပိုင်းအဆင့် သို့ သိပ္ပံပညာရှင်များ ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။
ယင်းကပ်ပါးပိုး၏ မျိုးဗီဇ သည် ကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် ကိုယ်ခံစနစ်က ထုတ်လုပ်သော ပရိုတိန်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုများမှ တွေ့ ရှိချက်အရ ကပ်ပါးပိုးများကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်ဖြတ်နိုင်သော ပရိုတိန်း၏ ဗီဇပြောင်းပုံစံကို ဘယ်လ်ဂျီယံသုတေသီများက ပြု လုပ်ထားသည်။ လေ့လာမှုကို Na-ture ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
gambiense ကပ်ပါး၏မျိုး ဗီဇသည် အာဖရိက၏အနောက် ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွား သောအိပ်ငိုက်ရောဂါ၏ ၉ရရာခိုင် နှုန်းကျော်ကို ဖြစ်ပွားစေသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ် ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၂ခုနှစ်က ၎င်း ရောဂါ ၇၁၉ရဦးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကိုယ်ခံစနစ်သည် ကပ်ပါး ပိုးတို့ကိုကြိုးစားတိုက်ဖျက်ရန် apol1 ကို ထုတ်လုပ်သည်။gambiense ကပ်ပါးသည် ပရိုတိန်း apol1 ကို တိုက်ဖျက်ရန် အပိုင်းသုံး ပိုင်းပါ ကာကွယ်ရေးယန္တရားအား မည်သို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေသည် ကိုdk Universite Libre de Bruxelles မှသုတေသီများက ပြသခဲ့ ကြသည်။ apol1 ကို သာမန်အား ဖြင့် trypanosoma ကပ်ပါးက လက်ခံသည်။ ပရိုတိန်းက ကပ်ပါး အတွက် အကျိုးပြုသည်ဟု ယုံ ကြည်အောင် လှည့်စားသည်။ ထို့ နောက် ပရိုတိန်းသည် အူအမြှေး နံရံများထဲသို့မြုပ်ဝင်ကာ ထိုရော ဂါမှာပင် ကပ်ပါးကို သတ်လိုက် သည်ဟုဆိုသည်။
gambiense ၏ ကာကွယ် မှုပထမဆင့်တွင် ၎င်းကပ်ပါးတို့ သည် apol1 ပရိုတိန်းကိုဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရန် အမြှေးများကိုတောင့် တင်းစေသောပရိုတိန်းတစ်မျိုး ကိုဖန်တီးသည်ဟု ဦးဆောင်စာ တမ်းရေးသားသူ ပါမောက္ခ Etienne pays က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒုတိယအဆင့်မှာ ပရိုတိန်းများ ကိုစုပ်ယူရန် ကပ်ပါးများအတွက် ပိုမိုခက်ခဲစေရန်ဖြစ်သည်။ နောက် ဆုံးတွင် ပရိုတိန်းသည် အခြားအ တားအဆီးများကို ဖြတ်သွားရန် ရှိပါက gambiense သည် အခြား ကပ်ပါးပုံစံများထက် ပို၍လျင် မြန်စွာ apol1 ကို ချေဖျက်နိုင်သည်။ သို့မှသာ ၎င်းကို အမြှေးများက စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမပြုမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းဖြစ်ရပ်က apol1 ၏အ သွင်ပြောင်းဗီဇကိုဖန်တီးရန် ပါ မောက္ခ Pays နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့အား တွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းအ သွင်ပြောင်းဗီဇ က gambiense ကပ်ပါးကိုသတ်နိုင်ရုံမက အာဖရိက Trypanosoma ကပ်ပါးအား လုံးကိုသတ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူများကို ထောင်သုံးနှစ်ချမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်တိုင်း စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့ နယ် ၃၃ ခု တွင် ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှုများကို အရေးကြီးသွင်းကုန် ဥပဒေပုဒ်မ(၈)အရ ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ချအရေးယူမည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဒေသ အာဏာပိုင်များက ကြေညာထားသည်။
လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် စီးနင်းသူများကို ယခင်က ဆိုင်ကယ်များကိုသာ ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း ယခုဖမ်းဆီးမှုတွင် စီးနင်းသူကိုပါ အပြစ်ပေးမှုများ ပြု လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“ခရိုင်က ညွှန်ကြားတာပါ။ ညက ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေအားလုံး သိအောင် လော်စပီကာနဲ့ လိုက်အော်တယ်။ ယာဉ်ထိန်းရဲရယ်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးထဲက တာဝန်ရှိသူတွေပေါင်းပြီး ဖမ်းမှာပါ”ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက ရန်ကုန်မြို့အတွင်း စီးနင်းခွင့်မရှိဘဲ မောင်းနှင်သည့် ဆိုင်ကယ် ၅၈၀ ကျော် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့သည်ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံး (ရန်ကုန်)ထံမှ သိရသည်။
“အခု ခရိုင်လေးခုက ခရိုင်မှူးတွေ ဦးစီးပြီးဖမ်းမယ်။ လိုင်စင် ရှိရှိ၊ မရှိရှိ ထောင်သုံးနှစ်ပဲ။ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်လုံးဝမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချယ်နဲ့”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲမှူးသာဌေးကပြောသည်။
“ဆေးလိပ်ငွေ့လိုပါပဲ။ ကြာရင်တော့ အငွေ့ပြယ်သွားမှာပဲလေ။ အခုတော့ ဆိုင်ကယ်ကို အိမ်ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ဦးမယ်”ဟု ရွှေပြည် သာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက မော်တော်ဆိုင်ကယ် မတော်တဆမှု၊ ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်တိုက်မှု စုစုပေါင်း ၈၂ ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၁ ဦး သေဆုံးကာ ၁၀၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် လူ ၃၃၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ဧပြီလအထိ လူ ၁၃၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုများဖြင့် ဆေးရုံများသို့ ရောက်ရှိလာသည့် လူနာများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူများ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အမျိုးသား တစ်ဦး ခုနစ်လွှာ အထပ်မြင့်မှ ပြုတ်ကျ သော်လည်း အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ပြည်နယ် ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့ ရစ်တန်ဟောက်စ် ရင်ပြင်ရှိ အဆောက် အအုံတစ်ခု၏ အထပ်မြင့် ခုနစ်လွှာမှ သြဂုတ် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်က ပြတင်းပေါက် သန့်ရှင်းရေး သမားတစ်ဦး ပြုတ်ကျ ခဲ့သော်လည်း အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သန့်ရှင်းရေး သမားသည် Rittenhouse Claridge အဆောက်အအုံရှိ အထပ်မြင့် ခုနစ်လွှာ အပြင် ဘက်တွင် ပြတင်းပေါက်ကို ဆိုင်းကြိုး အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ် နေစဉ် ပြုတ်ကျ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖီလာဒဲဖီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြား ခဲ့သည်။
၎င်း သန့်ရှင်းရေး သမားသည် အမှိုက်အိတ်ကြီး တစ်ခုပေါ် ပြုတ်ကျ ပြီးမှ မြေပြင် ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ဟန် တူကြောင်း၊ ယင်းနောက်တွင် အရေးပေါ် ဌာနသို့ မိမိက အကြောင်း ကြားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင် တစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်။ အထပ်မြင့်မှ ပြုတ်ကျ ခဲ့သော အဆိုပါ သန့်ရှင်းရေး သမားသည် သတိ မေ့ သွားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆေးဘက် အဖွဲ့၏ အကူ အညီဖြင့် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ကြောင်း ယခုအခါ ၎င်း၏ အခြေ အနေမှာ စိတ်ချ ရသော အနေ အထားတွင် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သန့်ရှင်း ရေးလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ စိတ်ချ ရမှုရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးရန် မြို့တော် စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့က အဆိုပါ နေရာသို့ လာရောက် စစ်ဆေး ခဲ့ကြကြောင်း မီးသတ် ဌာန၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
မိဘဖြစ်သူက သားဖြစ်သူကို အခန်းကျဉ်းထဲတွင် နှစ်သုံးဆယ်ကြာ ရက်စက်စွာ ပိတ်လှောင်ထား